တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး မွန်MNLA ရုံးခွဲစခန်းကို တပ်က ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆို
တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး မွန်MNLA ရုံးခွဲစခန်းကို တပ်က ထိန...
27 พ.ย. 2562 - 20:03 น.
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူ မှာ တပ်မတော်နဲ့ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် MNLA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် MNLA ရဲ့ မြို့နယ် ရုံးခွဲစခန်းကို တပ်က ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ MNLAရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူမြို့က မွန်ပြည်သစ် ထိန်းချုပ်ရာ ဂျပန်ရေတွင်းအနီးမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် မနက် ၉ နာရီခွဲ အချိန်က မွန်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ် MNLA နဲ့ တပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ရုံးခွဲစခန်းကို တပ်က ထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့ MNLA ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် နိုင်လရီဂကောင်းက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲအပြီး နေ့လယ် ၁နာရီလောက်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က MNLA ရဲ့ မြို့နယ်ခွဲရုံး ဖြစ်တဲ့ ဟင်္သာတိုင် ဂိတ်စခန်းနဲ့ ဂျပန်ရေတွင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်တည်းက တပ်ဘက်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ကို သွားဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် မနက်မှာတော့ ညှိနှိုင်းတာ အချိန်ကြာနေတာကြောင့် တပ်က အခုလို အလုံးအရင်း ဝင်ရောက်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ဦးစီးချုပ် နိုင်လရီကောင်းက ပြောပါတယ်။
"အဓိက သူတို့က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်ကတည်းက ဘုရားသုံးဆူမှာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးရုံးကို သူတို့ ဆက်သွယ်တယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်ကို သူတို့က သွားချင်တယ်။ ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီးတော့ လူအင်အား သုံး၊လေးဆယ်ပေါ့"၊
"ဆက်ဆံရေးရုံးကိုလည်း အကြောင်းကြားတယ်။ ဆက်ဆံရေးရုံးက ပြောတာက ဗဟိုကို တင်ပြရမယ်။ ဝင်ခွင့်ရမရပေါ့။ ညှိနှိုင်းပြီးမှ"၊
"ဗဟိုကို အကြောင်းကြားတော့ ဗဟိုမှာလည်း လူမစုံဘူး။ လူမစုံတော့ အစည်းအဝေးက အချိန်က နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့။ သူတို့ကလည်း မစောင့်နိုင်တော့ အင်အား ၂၀၊၃၀ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တပ်စခန်းနားက ဂိတ်စခန်း တစ်ခုကို လာတယ်။ လာတော့ အဲဒီမှာ ညှိနှိုင်းမရတော့ ဝင်လာတော့ ပစ်ကြတာပေါ့" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ အနီးအနားက ရွာသူရွာသားတွေဟာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကို ပြေးသွားခဲ့သလို နေ့လယ်ပိုင်းအထိ လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်သံတွေကို ကြားနေရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
အခု တပ်ဘက်က သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ရဲ့ စခန်းဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးကတည်းက တည်ထားတဲ့ စခန်းဖြစ်ပြီး အခုလို သိမ်းပိုက်တာဟာ အဲဒီစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်လရီကောင်းက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းအဖွဲ့က တစ်ဦး ဒဏ်ရာရတယ်လို့ သတင်းရရှိတဲ့အတွက် တပ်ဘက်ကို ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။
အခုလိုဖြစ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ တပ်မတော်တို့ကြား အရင်ကတည်းက ညှိနှိုင်းပြောဆိုထားမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ နိုင်လရီကောင်းက ပြောပါတယ်။
"သူတို့က နယ်စပ်နားမှာ ယိုးဒယားနဲ့ သူတို့နဲ့ ပြဿနာရှိတယ်။ နယ်စပ်ပြဿနာ။ အဲဒီကိစ္စကို သူတို့ ခဏ ခဏ ဖြေရှင်းတယ်။ အဲဒီကိစ္စက အရင်ကလည်း သူတို့ သွားရင် ကျွန်တော်တို့ဆီကို လာပါ။ အရပ်ဝတ်နဲ့ ။ နယ်စပ်က ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူပေးမယ်။ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးသွားကြ အရပ်ဝတ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီတစ်ခေါက်ကျ ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင်လာမှာ မသွားလို့မရဘူးပေါ့။ မလာရရင် တိုက်မယ့် ပုံစံမျိုးပေါ့" လို့ ပြောပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ မွန်ပြည်သစ်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကြားမှာ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ကရင်အလံ လာရောက် စိုက်ထူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့သလို မကြာခဏဆိုသလို နယ်မြေ အငြင်းပွားမှုတွေကြောင့် ပစ်ခတ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံ တွေကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး မွန်MNLA ရုံးခွဲစခန်းကို တပ်က ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆို